Khubarada Medicare - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'idada Medicare
$ 0 qorshayaal, dadka deegaanka
Ka hel qorshaha Faa'idada Medicare ee adiga laguu sameeyay, deriskaaga halkan Washington.
Kala hadal xulashooyinkaaga:
WAC 1-800-944-1247 (TTY: 711)
Ka raadi khubarada Medicare degmadaada
Wac wakiilka CHPW ee aaggaaga. Wakiiladayadu waa kuwo ruqsad haysta, saaxiibtinimo leh, wayna yaqaanaan waxa ka shaqeeya Washington — maxaa yeelay waxaan fadhinaa Washington.
Khubarada Medicare ee CHPW waxay kula hadli karaan taleefan ama wicitaan fiidyow. Ama jadwal kulan qof ahaaneed: Khubaradayada ayaa kuu sheegi kara goorta ay booqan doonaan rug caafimaad oo kuu dhow.
Ka dooro degmo liiska hoos -u -dhaca ama khariidada.Waxaad arki doontaa khubarada Faa'idada Medicare ee la heli karo. Guji magaca wakiilka si aad wax badan uga sii akhrido.
Guji khariidada si aad u aragto khabiiro jira
Liiska saacadaha imminka socda ee rugta kuugu dhow, riix halkan.
6 qorshe oo gaar ah
Waa maxay qorshaha kugu habboon? Eeg qorshayaasha Faa'idada Medicare oo isbarbar dhig faa'iidooyinka. Lacag -bixinnada, lacag -bixinta, iyo dawooyinka guud ayaa ka bilaabma $ 0 oo keliya.
Soo hel faa'iidooyin ka fiican
Tilmaamahayaga Faa'iidooyinka waxay muujinayaan sida qorshayaasha Faa'iidada Medicare ee CHPW ay u eegaan jaleecada. Wax ka baro caymiskayaga la xoojiyay ee 2022, oo ay ku jiraan ilkaha, aragga, iyo jirdhiska.
Faa'idada Medicare vs Medicare -ka asalka ah
Medicare ma aha inay noqoto mid adag. Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Faa'idada Medicare iyo Medicare -ka Asalka ah? Brisa Guajardo oo ka tirsan CHPW ayaa ku burburiya wax ka yar 2 daqiiqo.
Baro qorshayaasheena Faa'idada Medicare.
Khubaradayada Medicare ee ruqsada haysta ayaa ku dhex mari doona xulashooyinkaaga waxayna kula wadaagi doonaan waxa Qorshaha Faa'idada Medicare ee CHPW kuu qaban karo. Wac maanta — ma jirto wax kharash ah iyo wax waajib ah.
Naga soo wac lacag la'aan: 1-800-944-1247
Waxaan qaadan doonaa waqti aan ku baranno adiga iyo baahiyahaaga caafimaad.
Ballan la ballanso wakiilka CHPW ee deegaanka.
Diyaar ma u tahay inaad is qorto? Waxaad si fudud iskaga qori kartaa Faa'iidada Medicare CHPW hadda.